२५ भदौ, वीरगञ्ज । उपचारमा लापरबाही भएर मृत्यु भएको भनिएका बिक्रम चौधरीलाई न्याय माग्दै गर्दैै वीरगञ्जमा बिहीबार प्रर्दशन गरिएको छ । बाराको कोल्हवी नगरपालिका–४ सपहीका २२ वर्षीय चौधरीले न्याय र पीडित परिवारले उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग राखेर उनीहरुले प्रदेर्शन गरेका हुन् । भदौ २१ गते नारायणी अस्पतालको आईसीयूमा उपचारको क्रममा बिक्रमको मृत्यु भएको दाबी अस्पतालले गर्दै आएको छ ।
घटनाको निष्पक्ष छानवीन गर, दोषी डाक्टरलाई कारबाही गर, बिक्रम चौधरीलाई न्याय देऊ भन्दै प्रदर्शन गरिएको थियो । प्रदर्शनकारीले अस्पताल भित्रै ‘हत्यारा डाक्टर’ भनी आरोप समेत लगाएका थिए । मैले उपचार नपाएर मृत्यु पाएँ, म मरें मेरो जीवन समाप्त भयो तर तपाईं बाँचेर पनि किन मरे जस्तै हुनुहुन्छ ? मैले न्याय कहिले पाउने ? उल्लेख गरिएको व्यानर बोकेर उनीहरुले प्रदर्शन गरेका थिए ।
नारायणी अस्पतालकै हलबाट प्रदर्शन शुरु गरेका उनीहरुले नाराबाजी गर्दै बजार परिक्रमा समेत गरेका थिए ।
प्रदर्शनमा सहभागीले बिरामीको सजिलै उपचार गर्ने व्यवस्था गरियोस्, वी निड जष्टिस फर बिक्रम चौधरी, मृतक परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर लगायत नारा लेखिएका प्लेकार्ड समेत बोकेका थिए ।
छानवीनमा ढिलासुस्ती भएको महसुस भएकोले प्रदर्शन गरिएको उनीहरुले बताएका छन् । अस्पतालले गठन गरेको तीन सदस्यीय छानवीन समिति प्रति उनीहरुले असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । अस्पताल भित्रका चिकित्सकको मात्रै टिमले गर्ने अनुसन्धान निष्पक्ष हुनै नसक्ने दावी उनीहरुले गरेका छन् ।
प्रदर्शनमा सहभागी जीपी कोइराला फाउण्डेसनका सचिव धिरज गुप्ताले पहिले नै अस्पतालले उपचारमा लापरबाही नगरिएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने चिकित्सकबाट हुने छानवीन निष्पक्ष हुने संभावना नै नभएको बताए ।
‘पहिला हामीलाई तीन सदस्यी छानवीन समिति गठन गरिएको जानकारी मात्रै दिइएको थियो । पछि मात्रै नाम थाहा भयो,’ उनले भने, ‘जसमध्येका एक जना सदस्यले पहिले नै अस्पतालले उपचारमा लापरबाही नगरेको सामाजिक सञ्जालबाट दावी गरिसकेका रहेछन् । उनले निष्पक्ष छानवीन गर्छन् भनेर कसरी पत्याउने ?’
उनीहरुले छानवीन समितिमा बाहिरबाट पनि विज्ञ चिकित्सकलाई राखिनुपर्ने, सीसीटीभी फुटेज हेरेर अनुसन्धान हुनुपर्ने, छानवीनमा ढिलासुस्ती गर्न नहुने माग राखेका छन् ।
प्रदर्शनमा सहभागी बलिराम अधिकारीले बिक्रमले जसरी अरुले ज्यान गुमाउनु नपरोस् भनेर प्रदर्शनमा उत्रनु परेको बताए । ‘जनताको पसिनाले तिरेको करबाट तलब खाएर उपचारमा लापरबाही गर्ने छुट कसैलाई छैन, साधरण रुघाखोकी लागेर सर्वसाधरण मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बिक्रमको जस्तो हालत अरु विरामीको हुनुहुँदैन । त्यसका लागि घटनाको निष्पक्ष छानवीन र दोषीलाई कानुनी काररबाही हुनैपर्छ ।’
गम्भिर अवस्थामा विरामी अस्पताल आइसकेपछि कोरोना परीक्षणमा किन ढिलाई गरिएको हो ? त्यसको जवाफ अस्पताल प्रशासनले दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
बिक्रमका दाजु अनिल चौधरीले भने चुप लागेर बस्दा न्याय नपाउने स्थिति देखिएपछि सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको बताए । ‘सानो तिनो लापरबाही हैन, मेरो भाइको ज्यान गएको छ । चुप लागेर बस्दा वास्ता नै नगर्ने स्थिति आयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले आफन्त र शुभचिन्तकहरुमार्फत सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएका हौं ।’
क्रिटिकल केयर अब्जर्भेसन वार्डका प्रमुख डाक्टर रामपुकार साह संयोजक रहेको तीन सदस्यीय छानवीन समिति सोमबार बेलुका गठन गरिएको हो । समितिलाई अनुसन्धानका लागि तीन दिनको समय दिइएको थियो ।
छानवीन समितिका सदस्य समेत रहेका अस्पतालका प्रवक्ता बरिष्ठ चर्मरोग विशेषज्ञ डाक्टर अतुलेश चौरसियलो भने बिहीबार बेलुकासम्म प्रतिवेदन तयार हुने बताएका छन् ।
‘उपचारमा संलग्न सबै कर्मचरीको एक एक गरेर बयान लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि समितिमा छलफल गर्छौै,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि तीन दिनको समय पाएका थियौं । अहिलेपनि छलफलमै छौं । बेलुकासम्म प्रतिवेदन तयार हुन्छ ।’
नारायणी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट डाक्टर सञ्जय ठाकुरले भने प्रक्रियालाई नमानेर प्रदर्शन र नाराबाजीबाट न्याय खोजिएको बताए ।
‘छानवीन समिति गठन गरेका छौं, रिपोर्ट तयार गर्दैछन् । नाराबाजी र प्रदर्शन सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर भित्रैबाट मात्रै छानवीन समितिमा किन मानिस राखियो ? भनेर हल्ला गरिरहेका छन् । अस्पतालको तर्फबाट गर्न सक्ने काम गरिरहेका छौं । अरु निकायले पनि आफ्नो हिसाबले काम गर्छ नी ।’ अस्पताल जस्तो संवेदनशील ठाउँमा आएर होहलल्ला र नाराबाजी गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ ।
Categories Select Category Auto (314) Blog (3) English (768) Entertainment (431) Finance (731) Nepali (7,837) Sports (5,231) Tech (1,380) World (2,844)